बाइबल अध्ययन गर्ने तरिका—केले पढाइलाई रोचक बनाउँछ
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इबान इबानाग इलोको इसोको ईवी उङ्गान्गेला उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कक्चिक्वेल (पश्चिमी) कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काजाक काबीय किकाओन्डे किकाम्बा किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चुभास चेक चोवे जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जाभानिज जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डेनिश ड्रेहु तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) निआस निऊ नेपाली नोंगा न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पिजिन (क्यामरून) पोर्चुगिज पोलिश फन फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाश्कीर बिकोल बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मबुन्डा मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मालागासी माल्टिज मिजो म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लाट्भियन लाम्बा लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा लुभेल वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हौसा
पढाइलाई केले रोचक बनाउँछ?
बाइबल पढ्‌न तपाईंलाई कस्तो लाग्छ? पट्‌याइँलाग्दो वा रमाइलो? यो कुरा धेरै हदसम्म तपाईं कसरी पढ्‌नुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ। बाइबल पढाइलाई रोचक र रमाइलो बनाउन के गर्न सक्नुहुन्छ, विचार गर्नुहोस्।
आधुनिक भाषाको भरपर्दो अनुवाद छान्नुहोस्। नबुझिने शब्दहरू वा पुरानो जमानाका शब्दहरू प्रयोग गरिएको बाइबल पढ्‌नुभयो भने पढाइबाट आनन्द उठाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले बुझ्न सजिलो र मन छुने शब्दहरू प्रयोग गरिएको बाइबल छान्नुहोस्। अनि अनुवाद सही हुनुपर्छ भन्ने कुरा नबिर्सनुहोस्। *
आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नुहोस्। अहिले बाइबल छापिएको किताबको रूपमा मात्र नभई डिजिटल फर्म्याटमा पनि उपलब्ध छ। कुनै-कुनै बाइबल अनलाइन पढ्‌न सकिन्छ वा कम्प्युटर, ट्‌याबलेट, मोबाइल फोन आदिमा डाउनलोड गरेर पनि पढ्‌न सकिन्छ। कुनै-कुनै संस्करणमा थप विशेषताहरू पनि हुन्छन्‌। यसको प्रयोग गरेर तपाईंले त्यसै विषयसित सम्बन्धित अन्य बाइबल पदहरू खोज्न सक्नुहुन्छ वा विभिन्न बाइबल अनुवाद तुलना गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंलाई पढ्‌नभन्दा सुन्न मन पर्छ भने कुनै-कुनै भाषामा बाइबलको अडियो रेकर्डिङ पनि उपलब्ध छ। धेरैलाई सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा, लुगा धुँदा वा अन्य कुनै क्रियाकलापमा लागेको बेला सुन्न मन पर्छ। तपाईं पनि आफूलाई उपयुक्त हुने माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कि?
बाइबल अध्ययन सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुहोस्। बाइबल अध्ययन सामग्रीहरू प्रयोग गर्दा पढाइबाट अझ धेरै लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। बाइबलमा उल्लेख गरिएका ठाउँहरूको नक्सा प्रयोग गरेर आफूले बाइबलमा पढेको ठाउँ कहाँ पर्दो रहेछ भनेर थाह पाउन सक्नुहुन्छ। यसले गर्दा मनमा चित्र उतार्न सजिलो हुन्छ। यसै पत्रिकामा भएका लेखहरू वा jw.org वेबसाइटको “बाइबलको शिक्षा” भन्ने भागमा गएर तपाईंले बाइबलले सिकाउने शिक्षा बुझ्न सक्नुहुन्छ।
विभिन्न तरिका अपनाउनुहोस्। सुरुदेखि अन्तसम्म पढ्‌न झिजो लाग्छ भने तपाईंलाई मन पर्ने भागबाट बाइबल पढ्‌न सुरु गरे कसो होला? यसो गर्दा पढाइप्रति तपाईंको रुचि बढ्‌न सक्छ। बाइबलमा उल्लेख गरिएका प्रख्यात व्यक्तिहरूबारे थाह पाउन चाहनुहुन्छ भने ती पात्रहरूबारे बताइएको विवरण छानेर पढ्‌न सक्नुहुन्छ। यसको एउटा उदाहरण “ बाइबलमा उल्लिखित पात्रहरूलाई चिन्ने उद्देश्यसहित बाइबल पढ्‌नुहोस्” भन्ने पेटीमा दिइएको छ। अथवा तपाईं विषयवस्तुअनुसार वा घटना घटेको क्रमअनुसार पनि बाइबल पढ्‌न सक्नुहुन्छ। यीमध्ये कुनै तरिका अपनाउनुभए कसो होला
^ अनु.4धेरै मानिसलाई पवित्र बाइबल—नयाँ संसार अनुवाद सही, भरपर्दो र पढ्‌न सजिलो लागेको छ। यहोवाका साक्षीहरूद्वारा प्रकाशित यो बाइबल १३० भन्दा धेरै भाषामा उपलब्ध छ। तपाईंले jw.org वेबसाइट वा JW लाइब्रेरी एपबाट यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईं चाहनुहुन्छ भने यहोवाका साक्षीहरूले यो बाइबल तपाईंको घरमै ल्याइदिन सक्छन्‌।
बाइबलमा उल्लिखित पात्रहरूलाई चिन्ने उद्देश्यसहित बाइबल पढ्‌नुहोस्
केही वफादार स्त्री
१ शमूएल अध्याय २५
एस्तर अध्याय २-५, ७-९
(येशूकी आमा) मत्ती अध्याय १-२; लूका अध्याय १-२; साथै यूहन्ना २:१-१२; प्रेषित १:१२-१४; २:१-४ पनि हेर्नुहोस्
यहोशू अध्याय २, ६; साथै हिब्रू ११:३०, ३१; याकूब २:२४-२६ पनि हेर्नुहोस्
उत्पत्ति अध्याय २४-२७
उत्पत्ति अध्याय १७-१८, २०-२१, २३; साथै हिब्रू ११:११; १ पत्रुस ३:१-६ पनि हेर्नुहोस्
१ शमूएल अध्याय १-२
केही उल्लेखनीय पुरुष
उत्पत्ति ११-२४; साथै २५:१-११ पनि हेर्नुहोस्
१ शमूएल अध्याय १६-३०; २ शमूएल अध्याय १-२४; १ राजा अध्याय १-२
उत्पत्ति अध्याय ५-९
मत्ती अध्याय ४, १०, १४, १६-१७, २६; प्रेषित अध्याय १-५, ८-१२
प्रेषित अध्याय ७-१९, १३-२८
प्रस्थान अध्याय २-२०, २४, ३२-३४; गन्ती अध्याय ११-१७, २०, २१, २७, ३१; व्यवस्था अध्याय ३४
सुसमाचारका चार पुस्तक मत्ती, मर्कूस, लूका र यूहन्ना
यहोवाका साक्षीहरूद्वारा प्रकाशित बाइबल अध्ययन सामग्री
JW.ORG—यो वेबसाइटमा थुप्रै अध्ययन सामग्री पाइन्छ। यसमा “बाइबलसम्बन्धी प्रश्नहरूको जवाफ” भन्ने भाग पनि छ। साथै JW लाइब्रेरी एप डाउनलोड गर्ने तरिकाबारे पनि बताइएको छ
“त्यो असल भूमिलाई हेर्नुहोस्” (अङ्‌ग्रेजी)—यस पुस्तिकामा बाइबलमा उल्लिखित ठाउँहरूको नक्सा तथा फोटोहरू पाइन्छ
धर्मशास्त्रमा अन्तर्दृष्टि (अङ्‌ग्रेजी)—दुई वटा खण्ड भएको यो बाइबल इन्साइक्लोपीडियामा बाइबलमा उल्लेख गरिएका मानिस, ठाउँ तथा शब्दहरूको व्याख्या गरिएको छ
“धर्मशास्त्र—परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको र उपयोगी” (अङ्‌ग्रेजी)—यो किताबले बाइबलका प्रत्येक पुस्तक कहिले, कहाँ र किन लेखियो भनेर बताएको छ। यसमा प्रत्येक पुस्तकको विषयवस्तुको सारांश पनि दिइएको छ
बाइबल—परमेश्वरको वचन कि मानिसको? (अङ्‌ग्रेजी)—गहन अनुसन्धान गरेर तयार पारिएको यो सानो किताबले बाइबल परमेश्वरको प्रेरणाद्वारा लेखिएको पुस्तक हो भन्ने कुराको प्रमाण दिएको छ
बाइबल—यसले दिने सन्देश के हो?—यस ३२ पृष्ठे पुस्तिकामा बाइबलबारे आधारभूत ज्ञान दिइएको छ
नयाँ संसार अनुवाद अरू अनुवादभन्दा किन फरक छ?